Tamin'ny andro faharoa tamin'ny fampirantiana dia nitsiky tamim-pifaliana ny rehetra - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
Tamin'ny andro faharoa tamin'ny fampirantiana dia samy nitsiky tamim-pifaliana ny rehetra
Fotoana: 2019-05-23 Hits:
Rehefa afaka roa andro nanjelanjelatra dia nieritreritra aho fa namela sasatra tamin'ny tarehy foana isika, fa ny fanjakan'ny tsirairay na niroboka tao anaty asa feno fientanam-po, dia nofenoina tsiky feno hafaliana.
Fifanarahana consulting hot spot tsy tapaka
Ao amin'ny tranokala fampirantiana, mialoha sy aorian'ny booth ny JWELL ary anatiny sy ivelan'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny rihana faharoa, mafana be ny lazany. Tsy afaka mijanona mihitsy ny mpiasanay, ary mandray andraikitra mavitrika amin'ny fangatahan'ny mpanjifa rehetra, mitondra serivisy ho an'ny mpanjifa!Fakan-kevitra, fifandraisana, fanaovan-tsonia sonia tsy tapaka ...Mahatsapa lalina ny ahiahin'ny tsirairay sy ny fahatokisany an'i JWELL!
Ireo mpitsidika dia tonga amin'ny riaka tsy misy farany
Trano Jin Wei, dia famoahana angovo ny olona rehetra, fampisehoana fomba fanao amin'ny sehatra lehibe, eo ambanin'ny hafanam-ponay, ny mpanjifa dia mampiseho ny fahalianany amin'ny vokatra JWELL isan-karazany, noho izany ny mpiasan'ny varotra dia miasa, miasa metodaly, faharetana hampahafantatra ny karazan-vokatra rehetra, hamaly ny fifampidinihan'ny mpanjifa, sahirana ny rehetra, saingy afaka nahita fa feno fitsikiana faly amin'ny endrik'izy ireo ny tsirairay.
Ny marika dia ny fahefana, ny lanjany
Androany mafana be ny seho fampirantiana, marobe ny resadresaka na ny fanarahana ireo mpanjifa taloha sy ny mpanjifa vaovao no tonga tao amin'ny trano fisakafoanana Jin Wei, noho izany ny marika JWELL dia miorim-paka lalina ao am-pon'ny olona, ​​tsy vitan'ny hoe avelao ny olon-drehetra hino - ny marika dia hery, marika sanda, tadiavo ny milina JWELL dia ny mahita mpamatsy avo lenta, mitady ny marika mety no antoky ny fahombiazana!
"Mpanjifa an'ny JWELL nandritra ny taona maro aho, ary mifidy anao foana aho noho ny hatsaran'ny kalitao sy ny serivisy aorian'ny fivarotana ny fitaovanao."Henoy ny mpanjifa toy izao, ny mpiasa mivarotra mavitrika kokoa, tsy afaka miaina mifanaraka amin'ny fahatokisan'ny mpanjifa anay, hanome anao vokatra sy serivisy tsara kalitao izahay.
Ny traikefa tena marina dia nanatri-maso ny tanjaky ny marika JWELL
Efa mandeha ny Chinaplas2019. Miaraka amin'ny laharam-pamokarana matanjaka, fototra ara-teknika vaovao ary vahaolana amin'ny ankapobeny, JWELL dia mifantoka amin'ny "famokarana manan-tsaina, fitaovana teknolojia avo lenta ary teknolojia fiarovana ny tontolo iainana" mba hampisehoana amin'ny fomba feno ny festival teknolojia entin'ny indostrian'ny milina plastika.
Ny hafanam-po sy ny andro mahomby dia nifarana tsikelikely, mpanjifa miaraka amin'ny tsikitsiky afa-po, namana JWELL miaraka amina fahatsapana fahombiazana, tamin'ny fiaingan'ny, Jin Wei ity booth tsara tarehy ity dia mangina vetivety indray, tamin'izany fotoana izany dia nipetraka tany aminay izahay, Mampiasà fo hahafantarana ireo trano heva sy fampirantiana ataonay, karazana hatsarana mangina, toa ny manantena ny rahampitso vaovao.
HIVERINAMidira ao amin'ny JWELL, serasera mifanatrika, fanompoana am-po
NEXTNy andro voalohany dia nanao sonia sonia lehibe tokana, JWELL rehetra dia mampiseho fampakarana marika!